Fampirantiana haisary :: Nampiseho haikanto mampitolagaga i Maeva sy Larissia • AoRaha
Fampirantiana haisary Nampiseho haikanto mampitolagaga i Maeva sy Larissia
Tamin’ny alin’ny zoma lasa teo, tetsy amin’ny toeram-pisakafoanana Tamboho Tana Water Front, Ambodivona, no nampiranty ireo zavakanto novokariny Ratovonar Larissia sy Maeva Châteaux. Tovovavy roa mpiangaly haisary manan-talenta miavaka eo amin’io tontolo io ireto nampitolagaga ny maro ireto.
Haikanto maroloko, voakaly sy voarafitra ambonina tabilao lehibe velarana, ahitana sarina olona mifono hafatra lalina, biby isan-karazany, zava-boaary sy ny sisa, no nasehon’izy mirahavavy.
“Miainga avy amin’ny fiainako sy ny zavatra tsapako ny asa famoronana ataoko. Ho ahy manokana, tsy mifidy fotoana ny fanaovana sary fa mety avokoa. Izaho rahateo efa ela no nilomano tao anatin’ io tontolo io”, hoy Ratovonar Larissia. Ny sarina zava-boaary no tena manavanana azy. Lamba sy loko maro samihafa no akora fototra ampiasainy.
Ho an’i Maeva Châteaux kosa dia ny fandinihana ny tontolo manodidina sy ny fitiavana biby ary ny fampirisihana ny olona hanaja azy ireny no tena voizina ao anaty hosodoko ataony. “ Ny hatsaran’ny tontolo iainana, ny fiaraha-mirindran’izy ireo no loharanon’ny aingam-panahiko. Lamba sy loko ihany koa no akora ampiasaiko amin’ny sanganasa izay ataoko”, hoy ny fanazavany.
Talanjona tamin’ny fahaiza-manaon’izy roa avokoa ireo mpitsidika rehetra, na Malagasy na vahiny. Vao tanora tokoa i Larissia sy Maeva saingy efa mampiaiky ny maro ny talentan’izy ireo.
Tapatapany • Zavakanto
Famadihana tononkalo ho hira Hanolotra ny « Rotsin-kalo voalohany » i Thina Andriafaly
Finiavana sy saripika Nanokatra efitra fampirantiana azy manokana i Rijasolo
Tantara an-dampihazo :: Nahasarika olona maro ireo tantara roa nolalaovina tetsy Antsahamanitra
Fampitambarana talenta :: Nambabo ireo mpijery ny mozikan’ny tarika « Tradmix »